Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Miakatra ny tombom-barotra amin'ny trano fandraisam-bahiny, saingy mbola hijanona ho toy izany ihany ve?
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny indostrian'ny hotely dia marefo hatrany, manalavitra ny sakana vaovao tsirairay avy.
Ny indostrian'ny hotely amerikana dia manohy mahita ny fiakarany vola.
Any Eropa, ny fahombiazan'ny trano fandraisam-bahiny dia manohy mamaky hatrany hatrany.
Any Azia dia tsy miova ny zava-bitan'ny indostrian'ny hotely Sina.
Ny fampisehoana hotely manerantany dia mihatsara isam-bolana. Izany no vaovao mahafaly. Ny ahiahy maika kokoa dia ny hijanon'izany. Ny indostrian'ny hotely dia marefo hatrany, manalavitra ny sakana vaovao tsirairay avy.
Ny lozam-pifamoivoizana farany dia ny Delta variant, izay nahatonga ny tranga COVID hiparitaka tamin'ny faritra maro ary nanipy valizy tany amin'ny fihemorana tsikelikely. Vao tamin'ity herinandro ity dia nanoro hevitra ny Vondrona eropeana fa tsy mahazo mandeha any amin'ireo firenena mpikambana ao aminy ny Amerikanina aorian'ny fiakaran'ny tranga any Etazonia.
Mbola mandroso hatrany ny indostrian'ny hotely.
Mihetsika i Etazonia
Na dia manana fotoana kely aza ny faritra rehetra alohan'ny hivoahany amin'ny isa mialoha ny areti-mandringana 2019, ny fanatsarana isam-bolana dia mamporisika. ny USA manohy mahita ny fiakarany fidiram-bola: RevPAR tamin'ny Jolay 2021 dia nihoatra ny $ 20 avo kokoa noho ny tamin'ny volana lasa ary ankehitriny dia mihoatra ny 1,000% avo kokoa noho ny tamin'ny volana aprily 2020, ny nadiran'ny fahombiazan'ny trano fandraisam-bahiny.
Niakatra hatrany amin'ny 60% ny fibodoana tao anatin'ny iray volana, nanampy tamin'ny fitomboan'ny solika tamin'ny fidiram-bolan'ny trano fandraisam-bahiny. Mandritra izany fotoana izany dia mitohy hatrany ny asa, fa satria ny hotely, indrindra ny tsenan'ny toeram-pialan-tsasatra, miakatra miakatra dia miha miakatra hatrany ny karama. Diniho ny Miami Beach: ny karama totalin'ny $ 92 isaky ny efitrano misy amin'ny Jolay 2021, $ 18 fotsiny amin'ny haavon'ny Jolay 2019 ary 143% avo kokoa noho ny tamin'ny fotoana tamin'ny taon-dasa.
Ny fidiram-bola ambonimbony kokoa dia manampy amin'ny famatsiam-bola bebe kokoa amin'ny fidiram-bola bebe kokoa, miaraka amina US $ 67 amin'ny volana, fihenan'ny 18% amin'ny fotoana mitovy amin'ny 2019.
Fiakarana tahan'ny Vax EU
Any Eropa, izay any EU dia avo ny tahan'ny fanaovana vaksiny noho ny Etazonia, mitohy mihombo hatrany hatrany ny zava-bitan'ny hotely. Na izany aza, afaka niova izany noho ny fahombiazan'ny vaksin, izay nanetsika ny fihetseham-po eraky ny kaontinanta avy amin'ireo mpandeha sy mpampiasa vola.
Miorina Atsinanana tsy mifanaraka
Taorian'ny fidinana tombom-barotra tamin'ny volana febroary 2021 sy ny volana jona 2021, niroborobo ny GOPPAR tamin'ny volana jolay, nahatratra $ 29, 11% fotsiny ny haavon'ny jolay 2019 ary mihoatra ny 1,900% ambony noho ny tamin'ny jolay 2020, rehefa nivadika ho ratsy ny GOPPAR.
Ny fironana amin'ny fidiram-bola dia nitarina akaiky ny fironana amin'ny tombom-barotra, vokatra iray amin'ny fitantanana fandaniana voafehy, izay nahitana antonony ny karama taorian'ny fiakaran'ny volana febroary izay nanampy tamin'ny fampandehanana ny fihenan'ny tombom-barotra.
Sina no mitarika
Any Azia, Shinany zava-bitan'ny dia mifanaraka. Ny GOPPAR dia nitifitra niakatra taorian'ny halalin'ny lalina indrindra tamin'ny volana feb. Ankehitriny, hatramin'ny Jolay 2021, ny GOPPAR dia $ 2 avo kokoa noho ny tamin'ny Jolay 2021, asa iray nahagaga ary azo inoana fa ny tranga COVID tao amin'ny firenena dia nidina hatramin'ny aotra aotra taorian'ny fiakaran'ny COVID.